Olana fito manelingelina amin'ny varotra sosialy | Martech Zone
Alatsinainy Aprily 3, 2017 Kevin Avaratra
Varotra ara-tsosialy nanjary resabe lehibe, nefa maro ny mpiantsena sy mpivarotra no misakana ny "fanaovana sosialy" amin'ny fividianana sy fivarotana azy ireo. Fa maninona no izao?
Noho ny antony maro mitovy dia nitaky taona maro vao nifaninana tamin'ny varotra biriky sy biriky ny e-varotra. Ny varotra sosialy dia tontolo iainana sy fotokevitra tsy matotra, ary handany fotoana tsotra fotsiny izy hanoherana ny tontolon'ny fifamoivoizana voadinika tsara izay lasa e-varotra ankehitriny.
Betsaka ny olana ary lehibe ny mety hisian'ny fifanakalozan-kevitra misy resaka be dia be, saingy amin'ny ambaratonga lehibe, ireto ny antony enina lehibe mahatonga ny varotra sosialy tsy hitranga amin'ny fomba lehibe:
Misy ny adihevitra momba ny atao hoe varotra sosialy. Is it Facebook Marketplace? Fampiharana toa ny OfferUp ary Afoizo, izay toa fanipazana vato fotsiny craigslist? Famandrihana ve miaraka amin'ireo vondrom-piarahamonina mavitrika amin'ny CrateJoy? Famerenana dokam-barotra fotsiny amin'ny tambajotra sosialy? Mizara ny anao ve izany eBay lisitra ao amin'ny fahana media sosialy? Alohan'ny hiaingan'ny varotra sosialy dia mila mamorona ivon-kery izy. Amazon sy eBay no ivon'ny e-varotra. Tsy mbola misy mitovy amin'izany amin'ny varotra sosialy.
Tsy voatery mitady izany ny mpiantsena. Maherin'ny 50 isan-jaton'ny mpividy e-varotra no malaza mankany Amazon aloha rehefa miantsena an-tserasera izy ireo. Azonao atao ny mieritreritra fa ny eBay dia mandray ampahany lehibe amin'izany. Firy ny eyeballs azon'ny varotra sosialy? Azonao atao ny miloka fa tsy ny antsasaky ny iray tapitrisa tapitrisa no miaraka mitatitra ny eBay sy Amazon amin'ny maha-mpampiasa ny mpiantsena mavitrika azy.
Ratsy kokoa ny traikefa fiantsenana sy ny fisafidianana. Amin'ny maha mpivarotra anao, raha manana kaonty eBay sy Amazon.com ianao, dia afaka mividy izay rehetra amidy na aiza na aiza eto ambonin'ny tany. Amin'ny varotra sosialy, voafetra ihany ny fifantenana ny vokatra sy ny mpivarotra, ary tsy maintsy miala amin'ny lalanao ianao mba hahitana azy ireo, mamakivaky tranokala sy fananana marobe. Olana misy atody sy atody: ny vokatra vitsy kokoa dia vitsy ny mpivarotra ary vitsy ny fifamoivoizana — izay midika hoe vitsy kokoa ny mpivarotra — izay mamahana ny olana. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny mpivarotra dia misafidy ny hivarotra izay misy ny ankamaroan'ny tena mpividy, izay midika fa eo koa ny ankamaroan'ny vokatra tena izy.
Tsy afaka mihetsika amin'ny varotra sosialy ny mpiantsena raha tsy mieritreritra. Ny e-varotra dia manana ny fantsom-pivarotana sy ny fizotry ny fanovana hatramin'ny siansa iray. Amazon Prime angamba no ohatra tsara indrindra eto, saingy nandroso be ihany koa i eBay tato anatin'ny taona vitsivitsy. Ireo mpiantsena dia afaka manao fividianana tsena lehibe amin'ny filentehana, ary saika tsy misy fikorontanana — fa ilay havoana hiakarana mitady vokatra, hahatakatra ny fizotran'ny fifanakalozana ary ny famitana ny fifanakalozana ara-barotra sosialy dia lavitra kokoa ary tsy azo vinavinaina. Midika izany fa ambany ny tahan'ny fiovam-po avy amin'ny mpivarotra — avy amin'ny kamory mpanao fivarotana efa kely lavitra kokoa
Mora kokoa ny olana amin'ny fifanakalozam-bola. Amin'ny eBay na Amazon, ny antsipiriany farany amin'ny fifanakalozana-fanombanana ataon'ny mpivarotra, ny fanamafisana ny baiko, ny fanarahana ny fanatanterahana, ny fiverenana ary ny fifanakalozana, ny fifanolanana ary ny famahana ny fifanolanana dia voalamina tsara ary avy amin'ny toerana tokana sy afovoany izay azo tantanana vitsivitsy. kitika. Tompon-tranonkala tsy miankina maro no nanambola hatsembohana sy dolara toy izany koa mba hanandramana hifaninana amin'ity haavo avo lenta ity, ary misy antony marim-pototra — manintona ny mpiantsena toy ny orinasan'olona tsy misy izany. Amin'ny varotra sosialy, mbola mihatra ny lalàna any andrefana, toy ny nataony tamin'ny eBay tamin'ny taona 1999. Ho an'ny mpividy sy ny mpivarotra maro, tsy fanantenana manintona izany.
Sarotra ny mandresy ny olana momba ny fiainana manokana. Ny ahiahy momba ny tsiambaratelo ho an'ny ankamaroan'ny mpiantsena dia mihamitombo tato ho ato, ary tsy very izany ara-tsosialy matetika no fohy manangona ny angon-drakitra ataoko ary mampiasa azy io hahazoana tombony. Ho an'ny mpiantsena maro, varotra sosialy toa be dia be kely kokoa ny fiainana manokana, atahorana kokoa. Mila fotoana, foto-drafitr'asa, fivoarana ary fampahalalana momba an'ireto ahiahy ireto hatao. Mandritra izany fotoana izany dia mety ny mpivarotra izay mieritreritra fa hisy fiatraikany amin'ny taham-panovana.
Mijanona ho hetsika miavaka ny fiantsenana. Mety ho toa zavatra tsy mazava holazaina io, fa ny ankamaroan'ny mpampiasa media sosialy dia tsy vonona fotsiny hampifangaro ny fiaraha-miasa sy ny fiantsenana. Tsy mbola nanao izany izy ireo hatrizay, ary tsy misy lalàna na fahazarana napetraka hanosika ireo mpampiasa media sosialy hieritreritra miantsena rehefa mifanerasera izy ireo — na ny mifamadika amin'izany. Ny mpanjifa dia mbola tsy manana a ara-tsosialy toe-tsaina rehefa miantsena na a fiantsenana toe-tsaina rehefa mifanerasera. Afaka taona maro vao hamorona ity fikambanana ity izy ireo.
Raha mpivarotra ianao izay manontany tena raha tsy ianao na tsia tokony be amin'ny varotra sosialy, aza matahotra. Noho ireo antony ireo dia mety tsy mbola tsy ampy ianao. Na, raha atao amin'ny fomba hafa, dia mety hahazo tombony farafaharatsiny ianao amin'ny alàlan'ny fanindroany sy ny fanadiovana ny ezaka ataonao amin'ireo tsena lehibe, izay misy ny ankamaroan'ny mpiantsena, ary ny toerana azo antoka sy azo vinavinaina ho an'ny mpivarotra sy ny mpivarotra dia avo kokoa ihany.
Ka ho an'ny ankamaroan'ny mpivarotra, ny hevitra tsara indrindra amin'izao fotoana izao dia ny manao izay ataonao ihany — manome fahafaham-po ny mpanjifa, manome serivisy lehibe, mampivoatra ny orinasanao stratejika — ary mandray fanao vaovao na mikendry izay tsena vaovao ao anatin'io rafitra io. Ny ambiny dia hikarakara ny tenany.
Tags: AmazoncraigslistcratejoyEbaytsena facebookAfoizotolotravarotra sosialyolan'ny varotra sosialy